Uqalo oluhluthiweyo, bamboo Wall khaziweyo, Bamboo nokwadala - Golden Bamboo
Umtya olukiweyo we-Bamboo Decking D Series
Uqalo Deck DF021
Uqalo Deck DF121
Uqalo Deck DF321
Uqalo Deck DF621
I-Strand Wool Bamboo Decking M Series
Uqalo Deck MF021
Uqalo Deck MF121
Uqalo Deck MF321
Uqalo Deck MF621
I-Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd. yasekwa ngo-2011 kwaye igubungela indawo ye-133,400 yeemitha zesikwere. Umzi-mveliso ubekwe kwidolophu yaseNanjing, kwisixeko saseZhangzhou, kwiphondo laseFujian apho iyeyona ndawo ilungileyo yokukhula koqalo. Yimveliso entsha yoqalo kunye nenkampani yokusebenza yanamhlanje enomsebenzi "wokukhuthaza inkqubo yokhuselo lokusingqongileyo kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwezixhobo zendalo".
Iqela lethu liqulethe iingcali ezili-10 ezizinikeleyo ekuhlanganiseni ukuphanda ngoqalo, abayili abali-11 abaphambili, iingcali ezingama-26. I-REBO ligama lophawu, ligxile ekusasazeni inkcubeko yemveli kwaye kuyilo lokuyila ngokutsha. Njengomthengisi woqalo ongaphandle, intengiso yaphesheya igubungela i-US, i-EU, iMideast, i-Australia, iAsia, uMzantsi Melika, njl.
Funda nzulu +
Yomelele kwaye ithe nkqo bamboo izinto eludongeni olungaphambili ...
Ukusingqongileyo okunobuhlobo ...
Easy ufakelo imisonto bamboo ephothiweyo f ...
Ukuqina okuphezulu kwesilayidi esinganyangekiyo ngaphandle ...
Uxinzelelo olushushu umcu ephothiweyo ibhodi eyenziwe ngoqalo
Ukomelela kunye noxinano lweCarbonized Bamboo yangaphandle yangaphandle
Ibhodi ye-bamboo ineempawu ezininzi: yomelele, inzima, uxinizelelo oluphezulu, uzinzo oluphezulu, ukuhlala ixesha elide, njl. Iimpawu ezinjalo zenza ukuba izinto zithandwe kakhulu kwihlabathi. Okubaluleke ngakumbi, yinto enobungozi kwindalo ethintela ukusikwa kweenkuni kakhulu, kuba uqalo lunexesha lokukhula ngokukhawuleza kwaye luyakwazi ukuzihlaziya emva kokusika, nangona kunjalo ukhuni lunethuba elide kakhulu lokukhula (ngaphezulu kweminyaka engama-25), lisika ngokurhabaxa iinkuni ziya kutshabalalisa kakubi ihlathi kunye nokusingqongileyo. Kungenxa yoko le nto izinto zoqalo zisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezininzi kule mihla.
Ukuqina okuphezulu kweSlip Resistant Bamboo yangaphandle
I-bamboo inezibonelelo ezininzi kunye neempawu zoqoqosho kunye nendalo. Uqalo sisityalo esikhula ngokukhawuleza kwihlabathi. Inobuhlobo kakhulu kwindalo esingqongileyo kwaye inciphise kakhulu ukusika okunamandla kweenkuni. I-REBO ibhodi yokuhombisa eyenziwe ngoqalo yenziwe ngoxinzelelo lwe-bamboo kwaye inyangwe ngobushushu obuphezulu, i-carbonization enzulu kunye nobuchwephesha bokucinezela obushushu, eyenza ibhodi yomelele kakhulu, ithe tye, inzima kwaye yomelele. I-REBO decking decking iboniswa indawo enganyangekiyo nesiliphu (R10), efanelekileyo ebantwaneni, kwizilwanyana zasekhaya nakwabanye.
07 Ngamana 2021
Unonophelo lomgangatho woqalo- iingcebiso zokucoca kunye nolondolozo
Uqalo luhlobo olomeleleyo lwengca olulungeleyo ukwenza ithambeka elinzima kakhulu kunye neebhodi zokuhombisa. Umgangatho we-bamboo wenza ukuba igadi yakho ibonakale ngokwendalo kwaye intle. Umgangatho ongaphandle owenziwe ngoqalo usebenzisa ezona zinto ziphambili zoqalo, kwaye wenziwe ngetekhnoloji yokulungisa ...
uyifaka njani i-bamboo decking
Umgangatho we-bamboo obizwa ngokuba yi-bamboo flooring. Yenziwe ngemicu yoqalo ekumgangatho ophezulu kwaye icinezelwe ngamawaka aliwaka eetoni zetekhnoloji yoxinzelelo oluphezulu. Ukukhethwa kolu hlobo lwe-bamboo flooring kucoceke ngakumbi kunokomgangatho we-bamboo oqhelekileyo. Into mna...
rhuma incwadana yeendaba
Idilesi: I-175, iNational Rd 319, iNanjing High-tech Zone, iZhangzhou, eFujian